The Most Scenic Dzidzisai Trips In Europe | Save A Train
musha > Travel Europe > The Most Scenic Dzidzisai Trips In Europe
Kutora chitima ndeimwe yenzira kuwana yevedza nzvimbo dzakawanda muEurope. Nakidzwa makomo yevedza, munyanza, nharaunda nzizi uye incredible zvakapembererwa engineering - Ava The Most Scenic Train Trips mu Europe.
West Highland Line Scenic Train Trips, Scotland
All mune Hogwarts Express! Vazhinji 264km rwendo ari chete njanji chinopa muchidimbu dzinokatyamadza moors, lochs, mamwe kure nhepfenyuro muBritain uye - achiwedzera nokuputsanya zviri Harry Potter mashiripiti - the Glenfinnan viaduct yaishandiswa Hogwarts Express.
nzira: Paris kuti Zvakanaka
Misha zano nevhu-Tile-roofed, chena yemizambiringa, uye mvura naka yebhuruu!
A mazita The Most Scenic Dzidzisai Trips mu Europe zvaisazova kwakakwana pasina South-of-France. Zviri inozivikanwa runako rwaro, saka zviri hazvishamisi yakaita yedu pasi. Kutanga muna Paris, uri sunflower uye minda Provence elavender Kwapera maawa maviri chete. Ita chokwadi iwe kurongedza inoita yako, 'Nokuti French riviéra hachisi chinhu uchida zvakaitika muna Summer.
Rhine Valley Scenic Train Trips, Jerimani
Tevedzera makakombama yoRwizi Rhine sezvo zvinoita nzira yaro kubva Koblenz kuna wokuMainz. Ndiyo chete kwemaminitsi makumi mashanu kuchovha, asi munzira, uchaona nematende yemizambiringa vakabatirira dzorwizi mawere. Zvechokwadi sokunge chinhu kubva fairytale!
Vienna kuna Koblenz Zvitima
Breakfast mu Munich uye chisvusvuro muna Venice
3 nyika, 3 X maonero. Jump muchitima kubva Munich kusvika Venice uye vasvike nekumwira 3 nyika mutengo zvinoshamisa maonero. mutsetse uyu anomhanya kuburikidza mamwe makomo akanaka kwazvo, nzizi, nemisha yomumakomo muAustria, Jerimani, uye Italy. 3-in1 pamusoro The Most Scenic Train Trips mu Europe.
Munich kuna Venice Zvitima
Kana uri kutsvaka chinhu chiri kwete ungana uye zvakawanda pamusoro mhuka divi, ipapo rwendo uyu kwamuri. Kutangira wegungwa, mi- fjordland Kurumidzai kupa nzira pamawere chikomo zviso uye akasvibirira Mafuro. Iva nechokwadi kuti arongedze musango majombo, nokuti chitima rinomira pa akawanda rwendo Hiking mudungwe munzira.
Our okupedzisira nokuda pambiru iyi Scenic Dzidzisai Trips mu Europe ndiyo, Achikwira Glacier Express!
St. Moritz kuna Zermatt. 8 Maawa yakaisvonaka yevedza hwemafaro. Zvakasiyana akadana Glacier Express chinhu. Travel kuburikidza serakavakwa saka dzvene vokuEurope kuti kuchiteshi (pamwe Bernina) munhu UNESCO World Heritage Site; zviri zvakare kumusha panotangira simba Rhone uye Rhine Rivers.
Saka zvino imi anoitwa kuverenga, wagadzirira kuti wako yevedza chitima nzendo mu Europe, pana Save A Train tine akanakisisa matikiti chitima kufamba, panguva yakachipa pashiri prices, uye vazhinji mubhadharo mikana.
Unoda embed yedu Blog pambiru uri paIndaneti, zvino tinya pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fscenic-train-trips-europe%2F%0A%3Flang%3Dsn - (Mupumburu pasi kuona Embed Code)